Horoscope | Ainmat.com - Myanmar Blog
Author : Oak Soe - Monday, July 26. 2010
သူတို့က အကြားအမြင် ရတယ်ဆိုရင်ဖြင့် ကျွန်တော်တို့တတွေက မကြားမမြင်တွေလို ဖြစ်ကုန်ကြတော့မှာလား။ တကယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတိုင်း ကြားပါတယ်၊ မြင်ပါတယ်။ ဘယ်သူ့ဘယ်သူမှ ကျွန်တော်တို့ထက် ပိုပြီး ထူးချွန်၊ ထူးခြားနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။
Categories : Horoscope , Comments : 16 Comments
Defined Tags : knowledge, စိတ်နယ်လွန်
စိတ်နယ်လွန် စိတ်စွမ်းအားကမ္ဘာ (၂)
Author : Oak Soe - Thursday, July 15. 2010
ဝိဇ္ဖာယာန လောကီပညာရပ်များမှာ နက်နဲသည်၊ ခက်ခဲသည်၊ ဆန်းကြယ်သည်၊ သိမ်မွေ့သည်၊ အဘယ်မျှလောက် နက်နဲသနည်း ဆိုလျှင် ယခုခေတ် သိပ္ပံပညာ ပေတံဖြင့် တိုင်းထွာကြည့်၍ မမီနိုင်အောင် နက်နဲ ဆန်းကြယ်လှသည်။
Categories : Horoscope , Comments : 20 Comments
စိတ်နယ်လွန် စိတ်စွမ်းအားကမ္ဘာ (၁)
Author : Oak Soe - Friday, July 2. 2010
A one-million-dollar prize to anyone who can show - under proper observing conditions - evidence of any paranormal, supernatural, or occult power.
Categories : Horoscope , Comments :
ဂမ္ဘီရ လမ်းကြောင်းပေါ်မှ ကိုးန၀င်းရှာပုံတော် (၃)
Author : Oak Soe - Wednesday, June 30. 2010
စကားဦး။ ။ ကျေးဇူးရှင် သင်ဆရာ၊ မြင်ဆရာ၊ ကြားဆရာ အားလုံးအား ဤဆောင်းပါးဖြင့် ဦးခိုက်ပူဇော်ပါ၏။
"I have often admired the mystical way of Pythagoras, and the secret magic of numbers"
ဂမ္ဘီရ လမ်းကြောင်းပေါ်မှ ကိုးန၀င်းရှာပုံတော် (၂)
Author : Oak Soe - Wednesday, June 23. 2010
Number is the ruler of forms and ideas, and the cause of gods and demons. (Pythagoras)
Defined Tags : knowledge, ကိန်းဂဏန်းများအေ, အင်း၊ စမ, နိုင်ငံတကာ
ဂမ္ဘီရ လမ်းကြောင်းပေါ်မှ ကိုးန၀င်းရှာပုံတော် (၁)
Author : Oak Soe - Monday, June 21. 2010
Author : Lianno - Thursday, March 4. 2010
(ဒါမှမဟုတ်) ရာဇဝင်ယုံတမ်းထဲက အတိုင်း
တန်ခိုးရှင်များ ကောက်ကာ ငင်ကာရုတ်တရက်ပေါ်လာရင်
ဒီတောင်းဆုတစ်ခုသာ ငါ့အတွက် ပြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့....
Defined Tags : Horoscope, အဓိပ္ပာယ်
မဟာဘုတ် နဲ့ ဆရာလုပ်မယ်
Author : တေးအေးရိပ် - Thursday, June 12. 2008
မဘာဘုတ်နဲ့ ဆရာမလုပ်ခင် အဋ္ဌလဂ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ခြေဆင်းလေး အစပျိုးလိုက်မယ် ။ အဋ္ဌလဂ်ဆိုတာ ဂြိုဟ် ၈ လုံးရဲ့ အရပ်မျက်နှာ စိုးမိုးမှု နဲ့ ကာလအပိုင်းအခြား ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ ကို ဖော်ပြတဲ့ ဇယားလေးပေါ့။ မသိရင်မှတ်ထားအုံး ..လင်္ကာကတော့ " အိပ် ခန်း စက် ၀င် နက် မှင် ရိပ် သန်း" ဆိုပြီး လက်ယာရစ် အတိုင်း ခွင်လေးချပေါ့။ ပုံကိုကြည့် ... အားရအောင်..
Categories : Horoscope , Comments : 8 Comments
Defined Tags : Horoscope, မဟာဘုတ်
Author : တေးအေးရိပ် - Sunday, April 27. 2008
မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် ပညာ မှာ
"ကာလဒေသပုဂ္ဂလကို မှတ်ရစ်ပုံသေ မရှိစေနှင့်" တဲ့
Defined Tags : Horoscope
အိုး ကလေး လှုပ်ပါဟေ့..အိုး ကလေး လှုပ်ပါဟေ့
Author : တေးအေးရိပ် - Wednesday, February 27. 2008
“အိုး ကလေး လှုပ်ပါဟေ့ .. အိုးကလေး လှုပ်ပါဟေ့ ”
“အိုး ..ကလေး လှုပ်ပါဟေ့.အိုး ...ကလေး လှုပ်ပါဟေ့ ”
Categories : Horoscope , Comments :3Comments
ကျိမ်းစောက် ဆုပ်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ ???
Author : တေးအေးရိပ် - Sunday, February 24. 2008
ကျောက်စိမ်း နဲ့ ထုထားတဲ့ ဆင်ရုပ်
သုနက္ခတ္တံ သုမင်္ဂလံ & Applied Astrology - ၃
Author : တေးအေးရိပ် - Sunday, August 12. 2007
အချို့ တွေက လောကီပညာကို ဘုရားမဟောဘူး ဆိုပြီး လူတတ်လုပ်ပြီး ပယ်ချင်ကြပါတယ်။ အဲဒီလို ဖင်ပိတ်ပြီး အငြင်းသန်တဲ့ လူတွေအတွက် လောကီပညာတွေရဲ့ တန်ခိုးသတ္တိ ကြီးမားပုံကို ' လောက၀ိသယ အစိန္တေယျ ' ဆိုပြီးတော့ ဘုရားရှင်ဟောကြားခဲ့တာ မသိသေးလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Categories : Horoscope , Comments :6Comments
Defined Tags : Horoscope, နက္ခတ်
Page5of 5, totaling 60 entries